Stanolone (DHT) vovoka (521-18-6) Mpanao sy mpamatsy - Factory
Rano Stanolone (DHT) roan-jato (521-18-6)
Androstanolone dia mitovy amin'ny DHT. Ny DHT dia natao indrindra amin'ny fitsapana, ny volon'ireo volon'ondry, ny lohalika adrenaliny ary ny dabozon'ny prostaty ary novokarina rehefa mifandray amin'ny testosteron ny enzyme ao amin'ny vatana. Ao an-kibo, ny DHT dia mandrisika ny fampivoarana ny toetran'ny lahy sy ny zaza amam-behivavy.
Rohan Stanolone (DHT) (521-18-6) video
Rohan Stanolone (DHT) Pulver (521-18-6) Description
Ny metabolita Rano Stanolone (DHT) dia ny metabolita avy amin'ny hormone testosterone, izay miorina voalohany indrindra ao amin'ny prostate, ny testes, ny volo fotsy ary ny trondro adrenalin'ny 5-alpha-reductase enzyme amin'ny alàlan'ny fampihenana ny alfa 4, 5 double-bond. Ny dihydrotestosterone dia anisan'ny kilasin'ny antsoina hoe androgens, izay matetika koa antsoina hoe hormones androgenic na steroïde, izay endroogne steroid sy hormone androgen sex. Agonista ny mpanaraka ny androgen (AR). Izy io dia mitana toerana manan-danja ara-psikolojika amin'ny fiovan'ny firaisana ara-nofo, ny fahatsapana ny penis sy ny scrotum, ny volom-borona, ny famokarana sebacea ary ny fampandrosoana ary ny fikojakojana ny prostaty sy ny vesicles. Ny ankamaroany dia ampiasaina amin'ny fitsaboana ny gonogonadisma lahy, ny tsy fahampian-tsakafo amin'ny aretina mafy, ny tsy fahampian-tsakafo amin'ny vanin-taonan'ny marary sy ny mikrofilo amin'ny fahazazana.
Rano Stanolone (DHT) roan-jato (521-18-6) Specifications
Product Name Rano Stanolone (DHT) roapolo
Anarana simika 5α-androstan-17β-ol-3-one solution,(5-alpha,17-
Drug Class Steroids; Pharmaceuticals; Steroid and Hormone; API
molekiolan'ny Formula C19H30O2
molekiolan'ny Wvalo 290.44
mitsonika Point 178-183 ° C
mangotraka Point 372.52 ° C (tombanana)
Ny antsasaky ny biolojia 8-9 ora
Solubility Rano, 525 mg / mL (amin'ny 25 ° C)
Stanolone Application Ny fampiasana aretina mandoza, ny osteoporose, ny aretina mafy sy ny taolam-paty, ny fandoroana, sns, vokatry ny tsy fahampian-tsakafo marefo, dia mampiroborobo ny zaza vao teraka sy ny tsy fahampiana, sns. Tsy mora ny manasitrana, ny hypercholesterolemia ary ny fahaketrahana ny fahaketrahana dia afaka ampiasaina ihany koa . Ary ny poofa Stanolone Raw dia azo ampiasaina ho fitaovana fanafody.
Inona moa ny poeta Raw Stanolone (DHT) (521-18-6)?
Ny Androstanolone, na stanolone, fantatra amin'ny anarana hoe dihydrotestosterone (DHT) ary namidy teo ambanin'ny anarana hoe Andractim, dia ny androgen sy anabolic steroid (AAS) fanafody sy hormone izay ampiasaina indrindra amin'ny fitsaboana aretina testosterone ambany amin'ny lehilahy. Izy io koa dia ampiasaina amin'ny fitomboan'ny fampiroboroboana ny zaza sy ny penis kely amin'ny lahy. Amin'ny ankapobeny dia omena azy toy ny gel mba hampiharina eo amin'ny hoditra, fa azo ampiasaina amin'ny maha-ester amin'ny fitsaboana azy amin'ny hozatra.
Ahoana ny Rohan Stanolone (DHT) (521-18-6) asa
Izany dia atao amin'ny fihetsika an'ity enzyme 3-oxo-5-alpha-steroid-4-dehydrogenase. Ny Dihydrotestosterone (DHT) dia novolavolaina tamin'ny famerenana alpha 5 ny testosterone. Tsy toy ny testosterone, ny DHT dia tsy azo tsinontsinoavina amin'ny estradiol noho izany antony androstanolone izany dia ekena ho steroid androgenic. Ny dihydrotestosterone (DHT) dia ny metabolita azo avy amin'ny hormone testosterone, izay miorina voalohany indrindra avy amin'ny fihanaky ny prostaty, ny fitsapana, ny volo-pihary, ary ny onja adrenalina avy amin'ny mpizara 5-alpha-reductase amin'ny fampihenana ny ala, 5double. Ny dihydrotestosterone dia tompon'io karazan'ny akora simika antsoina hoe androgens io, izay matetika koa antsoina hoe hormones androgenic na testoids. Ny DHT dia heverina fa eo amin'ny 30 eo ho eo no mahery kokoa noho ny testosterone vokatry ny fifindran'ny fitomboan'ny mpandoka ny androgen.
Roahina Stanolone (DHT) pohe (521-18-6) Dosage
Ny Stanolone dia amidy amin'ny tsenam-barotry ny veterinary any amin'ny firenena sasany ao amin'ny 20 na 50 mg / ml. Ny lahy dia tokony handray ny 200-400mg isan-kerinandro, ary ny injections dia mila indray mandeha isan-kerinandro.
Ny vehivavy dia afaka manandrana amin'ny nandrolones noho ny fahalemen'izy ireo sy ny firosoana androgenic ambany. Na dia izany aza, mbola somary androgenic ihany izy ireo, noho izany, ny 50 mgs isan-kerinandro dia omena ho an'ny vehivavy, ary raha mitranga ny olana amin'ny viriosy, tokony hampitsahatra avy hatrany ny fampiasana laurabolin.
Androstanolone dia mitovitovy amin'ny dihydrotestosterone ao amin'ny vatany izay, araka ny fantatsika, dia mifototra amin'ny fiovan'ny periferika testosterone. Ny sasany miantso ny Androstanolone dihydrotestosterone. Ny Androstanolone dia manana fiantraikany amin'ny androgenic ny ankamaroany ary, noho ny rafitra, dia tsy azo ovadika ho estrogen. Ho an'ny fametrahana haingana ny herin'ny hery sy ny arintany Androstanolone dia tsy manan-danja.
Androstanolone dia nieritreritra fa ny fifaninanana ankafizin'ny atleta dia ny steroid satria izy io dia nanampy tamin'ny fahazoana hery misimisy kokoa tamin'ny alàlan'ny vidy matavy ambany amin'ny fampitomboana ny androgen tsy misy fofona. Atleta maro no nampiasa Androstanolone nandritra ny fiatrehana fiofanana ho an'ny doping fizahan-tany, satria ny vatana dia mijanona ao amin'ny vatana mandritra ny fotoana fohy ary ny lanjan'ny testosteron / epitestosterone dia tsy misy fiantraikany. Ny toetra tsara hafa dia ny hoe tsy misy poizina ny dika an-tsokosoko.
Buy Stanolone (DHT) vovoka avy amin'ny Buyaas.com
Raw Masteron Enanthate (Drostanolone) poids (472-61-1)
Raw Methasteron (Superdrol) vovoka (3381-88-2)
Ny Propionate Rastonolone Rano (Masteron Propionate) (521-12-0)